Hawlgallo amniga la xiriira ii habeenkii 3-aad ka socda Galkacyo. – Radio Daljir
Hawlgallo amniga la xiriira ii habeenkii 3-aad ka socda Galkacyo.
Luulyo 24, 2012 11:34 b 0
Galkacyo, July 24 – Waxaa habeenkii 3-aad ka socda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug hawlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidamada ammaanka Puntland, kuwaasi oo intii ay socdeen lagu qabqabtay dad iyo gaadiid intaba.
Hawlgalladaan, ayaa waxaa looga golleeyahay sidii wax looga baddali lahaa xaaladda amni ee magaalada oo muddo dheer dugaal u ahayd dambiyo maleegan, waxaana uu ku wajahan yahay kooxaha gaysta falal dambiyeedyada qorshaysan ee gobolka ka dhaca, burcad-badeedda iyo dhinacyo kale oo dawladdu ay ku tilmaantay dawlad-diid in ay yihiin.
Waddooyinka magaalada Galkacyo, gaar ahaan baraha isgooysyada ah ayaa ku arkaysaa ciidamo bilays ah oo dhigtay jid-gooyooyin, baaris xoogganna ku samaynaya dadka iyo gaadiidka maraya waddooyinka magaalada.
Ciidamadu, waxay baabuurta ka diirayaan bacaha madmadaw ee muraayadaha lagu dhagsado ee beersoolka loo yaqaanno, waxaayna gaadiidka ka hubinayaan lambarka aqoonsi iyo meesha uu ka diiwaan-gashan yahay.
Dhinaca kale maanta, magaalada Galkacyo waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ay iskugu yimaadeen madaxda hay?adda dawliga ah ee gobolka ka jira, saraakiisha ciidamada hawlgallada wada hoggaaminaysa iyo wax-ku-oolka bulshada gobolka, kaasoo looga wada hadlay sidii la iskaga kaashan lahaa amniga gobolka, ciidamadana gacan loogu siin lahaa hawlahooda amni sugineed.
Kulankaasi, waxaa lagu guddoonsaday si xal loogu helo mushiladda ammaan darro ee gobolka in loo wada guntado, lagana wada shaqeeyo ka mira-dhalinta qorshaha lagu damacsan yahay xasilinta gobolka.
Hawlgallada amniga ku saabsan ee laga wado magaalada Galkacyo ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddo sannado ah magaalada Galkacyo ay ka jiraan fadqalalooyin dhan ka ah amniga, kuwaasi oo ay ugu badnaayeen dilal qorshaysan oo lala beegsanayey haldoorka ummadeed ee gobolka.
Shirkii ergooyinka ansixinta dastuurka Soomaaliya oo maanta Jimce ah baaqday.
?Annagaa dalbanay Ciidanka oo waliba lugahayaga ugu tagnay madaxweynaha Puntland, annagoo u sheegnay Mudug inay ciidamo u baahan-tahay? Duqa Gaalkacyo Siciid.